Mamelona indray ny teny Cree sy Ojibwe an’i Manitoba miaraka amin’ny TikTok · Global Voices teny Malagasy
Fanontaniana sy Valiny miaraka amin'i Tiktoker Sharissa Neault, mampiroborobo ny fiteny teratany antserasera
Voadika ny 26 Septambra 2021 4:43 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, македонски, русский, Esperanto , Français, Español, English, English
Pikantsarin'ny @micec.mb kaonty TikTok.
Amin'ny maha ankizy nihalehibe tao amin'ny Firenena Fox Lake Cree ao avaratr'i Manitoba, Canada, te handre ny fiteny (Cree) Ininímowini avy amin'ny raibe sy renibeny i Sharissa Neault. Saingy, tsy nampitaina tamin'ny reniny ilay fiteny ka vokatr'izany dia tsy tonga tany amin'i Neault ihany koa. “Rehefa nihalehibe aho dia tsy nihaino firy ny Ininímowin mandra-pinoako hoe very izany,” hoy izy nitantara tamin'ny resadresaka tamin'ny mailaka niarahana tamin'ny Rising Voices.
Mandroso haingana mandraka androany, nifindra tany Winnipeg i Neault ary nanomboka niasa tao amin'ny Ivotoerana Fampianarana Ara-kolontsaina Teratany Manitoba (MICEC), fikambanana fanabeazana tsy mitady tombombarotra izay manome programa sy tolotra hanampiana amin'ny fampahafantarana ny kolontsaina teratany ao amin'ny Faritanin'i Manitoba. Miorina ao amin'ny faritany Firenena Voalohany nentim-paharazana Cree, Dakota, Dene, Ojibway, sy Oji-Cree ary ny Firenena Métis ity Faritany Kanadiana ity.
Rehefa nanomboka tao amin'ny MICEC izy, dia nahita fomba maro samihafa hampiroboroboana ireo fiteny ireo i Neault, ao anatin'izany ny media sosialy. Niara-niasa tamin'i Noa Malazdrewicz izy, nandray anjara mavitrika tamin'ny fizarana ny fiteny Ojibwe, ary nanomboka namorona horonantsary TikTok tao amin'ny kaontin'ny Foibe (@micec.mb) izy ireo. Manambatra ny vazivazy, ny fampiasana ny fiteny isan'andro, ary ny toe-javatra misy ifandraisany, manampy amin'ny fidirana amin'ny fiteny ireo lahatsary ireo, indrindra mandritra ny areti-mandringana izay olona maro no any an-trano. Nahafa-po ny valiny, satria nizara niaraka tamin'ny News Site an'ny Oniversiten'i Winnipeg, izay ianarany amin'izao fotoana izao i Neault:
“Mahita izany ny tanora ary milaza hoe” Misaotra, henoko ny renibeko nilaza izany tamin'izaho mbola kely, ” Tsy nandre ny fiteniko efa taona maro aho, misaotra anao, ‘na’ tsy fantatro raha mbola afaka mianatra ny fiteniko aho, ‘”hoy i Neault. “Mendrika izany ireo fanehoan-kevitra.”
Sary nomen'i Sharissa Neault ary nahazoana alàlana. Photo provided by Sharissa Neault and used with permission.
Amin'ity resadresaka fohy nifanaovana tamin'ny Rising Voice ity, dia mizara vaovao misimisy kokoa momba ny tenany, ny fiteniny ary ny fikatrohana nomerika ataony izy:
Rising Voices (RV): Manao ahoana ny toetoetry ny fiteninao ankehitriny na amin'ny aterineto na ivelan'ny aterineto?
Sharissa Neault (SN): Misy fitenim-paritra 5 amin'ny fiteny Cree, izay miovaova arakaraka ny fiarahamonina. Miteny ny fitenim-paritra n (Swampy Cree) ny fianakaviako, ary ho faty ao anatin'ny 10-20 taona manaraka miaraka amin'ireo mpiteny sisa tavela mahafehy izany ny fitenim-paritra Cree an'ny vondrom-piarahamoniko. Tombanako ho 500 latsaka ireo mpiteny mahafehy ny fiteny izay latsaky ny 50 taona any amin'ny vondrom-piarahamonina hafa manerana an'i Manitoba. Rehefa lasa ireo zokinay mpiteny mahay, dia hiankina amin'ireo tanora vitsivitsy ireo, sy ny zanak'izy ireo izahay mba hitondra ny fiteny amin'ny aterineto sy ivelan'ny aterineto. Tsy ampy fitaovam-pianarana ny fiteny ny fitenim-paritra n, na izany aza, misy ny olona miasa mafy amin'ny famoronana azy ireo miaraka amin'ireo mpiteninay mahay sisa tavela. Ny tenim-paritra y (Plains Cree) no tsara toerana kokoa, ahitana mpiteny marobe kokoa latsaky ny 50 taona, ary loharano hafa maro an-tserasera sy ivelan'ny aterineto.
RV: Inona no fanamby lehibe indrindra natrehinao nandritra ny hetsika nataonao hampiroboroboana ny fiteninao sy ny kolontsainao amin'ny aterineto? Ary inona avy ireo fomba sasany nandramanao handresena ireo fanamby ireo?
SN: Ny fanamby lehibe indrindra teo amiko dia ny fitadiavana fotoana hamoronana votoaty miaraka amin'ireo asa fanoloran-tena hafa. Manao izay fara heriko aho hamoronana votoaty rehefa afaka, ary taloha aho nanangona horonan-tsary hozaraina rehefa tsy afaka mandrakitra matetika.
RV: Inona avy ireo antony lehibe manosika anao amin'ny fikatrohana ny fiteny antserasera?
SN: Ny antony manosika ahy lehibe indrindra dia ireo tanora teratany izay toa ahy ihany tamin'izaho 15 taona. Ireo tanora teratany izay mihevitra fa very ny kolontsain'izy ireo sy ny fitenin'izy ireo. Manantena aho fa rehefa mahita antsika sy mandre antsika izy ireo dia afaka mahita sy mandre ny tenan'izy ireo ihany; Manantena aho fa afaka manampy olona iray toa ahy farafaharatsiny, mba haka indray ny fitenin'izy ireo.
RV: Inona ny fanantenanao sy nofinofinao amin'ny fiteninao?
SN: Manantena aho fa hijanona miaraka amintsika mandritra ny fotoana lava ny Ininímowin hahafahan'ny zafikeliko, na ny zafindohaliko, na ny zafi-paladiako sns, hianatra ny fiteny ho toy ny tenin'izy ireo voalohany, ary mahatakatra ny kolontsaina sarotra izay tafiditra ao anatin'ny teny tsirairay . Izay ihany no antenaiko.